The Official Website of KBZ Football Club
Cheap Autodesk AutoCAD Design Suite Ultimate 2013 OEMCanada LevitraCheap Windows7OemBuy Autodesk Revit Structure 2012 CheapBuy Windows7Ultimate 32 BitBuy Acrobat X ProBuy Mac Os 10.6 Snow LeopardBuy Photoshop Cs6 CheapMicrosoft Office 2007 OemCheap Adobe Font Folio 11Download Adobe Illustrator CS5 OEMBuy Maya Entertainment Creation Suite 2012Discount Creative Suite6Production Premium for Mac HomeHeadlinesFeaturesFixtures & ResultsYear 2009Year 2010Year 2011Year 2012Year 2013TeamAbout KBZ FCClub ProfileContact Us ရာသီဝက် ချန်ပီယံဆိုသော စကားလုံးအပေါ်တွင် သာယာ မနေသင့်ဟု ဆီဗာဂျီ ဆို
မကွေးအက်ဖ်စီအား အကောင်းဆုံး ကြိုးစားယှဉ်ပြိုင်မည်ဟု ဆီဗာဂျီ ဆို
“ပြီးခဲ့တဲ့ပွဲ အသင်းလိုက်စွမ်းဆောင်မှုနဲ့ ကစားပုံက ဒီရာသီမှာ အကောင်းဆုံးပါပဲ”
We must be at our best «
ရာသီဝက် ချန်ပီယံဆိုသော စကားလုံးအပေါ်တွင် သာယာ မနေသင့်ဟု ဆီဗာဂျီ ဆို
We must be at our best »
Channel7Match
MNL Myanmar 2013 League
Aung San Live Tv
တစ်သင်းလုံး အာရုံစိုက်ကြရန် ကျော်ဇင်ထက် တိုက်တွန်း	လုံးဝ အမှားခံ၍ မရဟု CEO ပြောကြား	ရာသီဝက် ချန်ပီယံဆိုသော စကားလုံးအပေါ်တွင် သာယာ မနေသင့်ဟု ဆီဗာဂျီ ဆို	မကွေးအက်ဖ်စီအား အကောင်းဆုံး ကြိုးစားယှဉ်ပြိုင်မည်ဟု ဆီဗာဂျီ ဆို	“ပြီးခဲ့တဲ့ပွဲ အသင်းလိုက်စွမ်းဆောင်မှုနဲ့ ကစားပုံက ဒီရာသီမှာ အကောင်းဆုံးပါပဲ”	ချန်ပီယံ ဆုများ မျှော်မှန်းနိုင်မည်ဟု ဦးမိုးဆန်းအောင် ယုံကြည်	We must be at our best အနိုင်မခံ အရှုံးမပေးစိတ်ဓါတ်ဖြင့် ရန်ကုန်ယူနိုက်တက်ကို အနိုင်ယူ	ကွင်းလယ် မစိုးမိုးနိုင်ခဲ့ဟု ဆီဗာဂျီ ၀န်ခံ	About KBZ Football Club	KBZ Football Club was founded in year 2005 and played as an amateur club in Myanmar League which was the highest football league in Myanmar. The first ever manager is U Myo Win Nyunt and coach is U Ye Nyunt. Since 2009, KBZ Football Club changed asaprofessional football club to play in Myanmar National League (Professional League) which was changed from Myanmar League.KBZ Football Club isaprofessional football club of Shan State and other seven Football Clubs represent for other seven Divisions/States.
We have7guests online	Total Visitors
Unique Visits, since 25 May 2009
KBZ Football Club © KBZfc.com All Rights Reserved. Powered By Ideal Technology Your are currently browsing this site with Internet Explorer6(IE6).